Wareegga waxsoosaarka wuxuu saadaalinayaa hoos u dhac dhaqaale oo soo socda | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Wareegga waxsoosaarku wuxuu saadaalinayaa hoos u dhac dhaqaale oo soo socda
Jose recio | | Bolsa, Alaabada maaliyadeed
Aad uga taxaddar inta lagu jiro sannadkan dhibaatada cusub ama hoos u dhaca dhaqaale ee soo ifbixi kara. Tani waxay caddayn kadib isbeddelka qalooca waxsoosaarka taas oo ka tarjumaysa in lagu soo shubay Maraykanka muddo aan ka badnayn laba sano. Xogta ugu horreysa ee ka muuqata halbeeggan dhaqaale waa qodob la xiriira sida xaqiiqda ah kala duwanaanshaha inta udhaxeysa bondka 5 iyo 3 horay loo maal galiyay. Calaamad aad muhiim u ah oo ku saabsan waxa ku jiri kara suuqyada wixii hadda ka dambeeya.
Calaamad kale oo muujinaysa in qalooca Mareykanka uu siinayo maalgashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexe sidoo kale waa mid aad muhiim u ah. Ma aha wax kale oo aan ahayn in faafitaanka u dhexeeya 10 iyo 2-sano bonds uu ahaa kii ugu hooseeyay tan iyo 2007. Xog kale oo xog ah oo ay dhexdhexaadiyeyaasha maaliyaddu shaki la’aan xisaabta ku darsadaan markay go’aansanayaan cabirka ay ka qaadayaan suuqyada sinnaanta xilliyadan. Haa Waayahay kala noqo jagooyinka suuqa saamiyada ama ka soo horjeedka inaad mar kale soo gasho si raasumaalkaaga shaqsiyeed ama maaliyadeed looga dhigo mid faa'iido leh.
Laakiin maxay dhab ahaantii tahay dulsaarka dulsaarka ee qayb weyn oo ka mid ah warbaahinta takhasuska leh ay aad uga hadlayaan? Hagaag, tiradean hal abuurka leh ee maalgashiga wax kayar ma ahan farqiga u dhexeeya faa'iidada kaas oo bixiya curaarta madaxbannaan ee 10-sano (tixraac waqti dheer ah) ee woqooyiga Ameerika iyo xiisaha warqadda 2-sano ah (muddada-gaaban). Hagaag, calaamadan daciifnimada ee suuqyada maaliyadeed ayaa lumisay 11 qodob oo saldhig u ah toddobaadkan. Heer oraah aan la arkin tan iyo 2007 iyo 2008. Muddo markii ay soo ifbaxday dhibaatadii ugu dambeysay ee dhaqaalaha iyo suuqyada saamiyada, oo saameysay adduunka oo dhan iyo, dabcan, suuqyada maaliyadeed.
1 Muhiimadda qalooca dhalidda
2 Khataraha dhaqaale xumo soo socota
3 Wax aan la daabicin ilaa waqtigaas
4 Sare u kac ku yimaada Mareykanka.
5 Dib-u-eegis ku saabsan qaaraddii hore
6 Tilmaamaha ku-simaha suuqa saamiyada
Muhiimadda qalooca dhalidda
Ku xirnaanshaha halbeeggan dhaqaale waa mid aad u sarreeya waxaana sabab u ah isku halaynta weyn ee qiimeynteeda. Iyadoo leh heer aad ugu eg kan ay matalayaan premium khatarta dhammaan aagga euro. Halkee, tusaale ahaan, dammaanadda Isbaanishka ee ku faafay wax ka badan 300 dhibcaha aasaasiga ah waxay metelan kartaa khatar caan ah, labadaba dhaqaalaha qaranka iyo suuqyada sinnaanta ee aaggan juquraafi ahaan. Isbadalkeeda, sidaas darteed, waxay aad ugu egtahay inta udhaxeysa xogta tixraacyadeeda. Iyada oo ay saameyn ku yeelanayaan dhammaan maalgashadayaashu xilligan.
Tani waa mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee si weyn looga feejignaado goosashada wax soo saar ee mid ka mid ah dhaqaalaha ugu awoodda badan adduunka. Sababtoo ah waxay ku siin kartaa calaamado kale oo ku saabsan waxa sida dhaqaalaha u socdo iyo natiijo ahaan, sidoo kale doorka suuqyada maaliyadeed ay ciyaari doonaan bilaha soo socda. Taasna, waxaad lahaan doontaa qodob aad u ansax ah si aad go'aan uga gaarto suuqyada maaliyadeed. Kaliya maahan saamiyada, laakiin sidoo kale dakhliga go'an, sida dhacday sanadihii la soo dhaafay.
Khataraha dhaqaale xumo soo socota
Si kastaba xaalku ha ahaadee, qalooca dhalidda rajaynayaa xaalad cusub oo muujinaysa wakhti dulqaad leh suuqyada sinnaanta ee aaggan juqraafiyeed muhiimadda ugu weyn adduunka u leh. Marka laga hadlayo xaaladdan guud, tani waa xaqiiqo in maal-gashadeyaasha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah aan lagu qaban karin feejignaan, maxaa yeelay waxaa horay u jiray falanqeeyayaal maaliyadeed oo fara badan oo ka digay suurtagalnimada suuqyada dhaqaalaha. Dareenkan, lama iloobi karo in sinnaanta Mareykanka ay lahaayeen wadiiqadii ugu wanaagsaneyd tobanaan sano, halkaas oo maalgashadayaasha ugu da'da yar aysan xasuusan mudadii ay jireen guulo badan iyo kuwa badan oo ka mid ah shaqooyinkooda.
Indices-ka dhinaca kale ee Atlantic-ga ayaa qiimeeyay tan iyo 2012-kii wax aan ka yarayn 90%, faa'iido aad u saraysa oo ka dhigtay maalqabeenada ugu gardarada badan. Sababtoo ah xitaa waxaa jiray kaydad kafiican waxqabadka guud, iyadoo qaddarin xitaa ka sarreysa 100%. Wax aan muddo dheer la arkin taasna waxay keentay in suuqyo maaliyadeed aad looga iibsado. Iyada oo mugga qorista oo waliba aad u sarreysey.
Wax aan la daabicin ilaa waqtigaas
Xaqiiqadan aan caadiga ahayn ee suuqyada saamiyada Mareykanka ayaa horseeday in boosaskan foosha xun laxakameeyo. Maaddaama aysan jirin wax saxitaanno ahmiyad gaar ah oo u dhexeeya, ma aha wax la yaab leh in isbeddelka suuqan sinnaanta uu isbeddeli karo wakhti kasta, xitaa xoog leh sidii la rabay bilowgii. Daqiiqad kasta, waxaa jira hal dhinac oo aan xilligan isbeddeleynin oo ah in aan hadda la joogin xilligii ku habboonaa in jagooyin laga qabto suuqan sinnaanta. Layaab ma leh, khatartu way sii kordhaysaa markay bilaha sii socdaan.
Sare u kac ku yimaada Mareykanka.
Mid ka mid ah waxyaabaha kiciya suuqa saamiyada Mareykanka si loo bilaabo xilliga adkeysiga ayaa ah xaqiiqda ah in inta lagu jiro 2019 ay jiraan koror cusub oo dulsaarka ah. In kasta oo suurtagalnimadani qayb ahaan laga dhimay suuqyada maaliyadeed, maahan sidaas marka loo eego xooggeeda. Si hufanna waa tan ugu weyn cabsida wakiilada maaliyadeed ee kala duwan iyo in suurtagalnimadaan ka hor ay xallinayaan jagooyinka suuqa saamiyada Mareykanka. Layaab ma leh, Talaadadii la soo dhaafay sinnaanta dalkan waxay hoos u dhacday ugu yaraan 3% sababtuna tahay aragtida xaaladdan cusub.
Horeba, falanqeeyayaashu waxay siinayaan muhiimad weyn waxa dulsaarka dulsaarku muujinayo iyo ku dhawaaqida dhaqaale xumida Maraykanka ugu badnaan muddo laba sano ah. In kasta oo xaqiiqda ay tahay in xogta ugu weyn ee dhaqaalaha dalka ay weli si muuqata u wanaagsan tahay. Halka ay tirada shaqo la'aanta laba iyo tobankii bilood ee la soo dhaafay waxaa loo dejiyay heer aan laga fiirsan dhaqaalaha ugu awoodda badan meeraha. In kasta oo taa lidkeeda ay tahay, koritaanka waddanku wuxuu ku sii socdaa socod xasad leh, sida ay aqoonsan yihiin dhaqaaleyahannada ugu muhiimsan dalka.
Dib-u-eegis ku saabsan qaaraddii hore
Muuqaal kale oo hadda la caddaynayo waa saamaynta uu hoos u dhacan dhaqaale ku yeelan lahaa waddamada aagga euro-da. Ma noqon doonto sida ugu badan ee ay filayaan ururada qaar oo aad uga yar marka loo eego isbadalka suuqyada sinaanta. Sharaxaadda macquulka ah waa in lagu raadsadaa isbeddelka labada suuq dhaqaale, taas oo waxoogaa aan sinnayn marka loo eego xoojinta kororka qiimaha saamiyada. Maaha wax aan micne lahayn, kor u fuula suuqyada saamiyada ee qaaraddii hore waxay ahaayeen kuwo aad uga dhexdhexaad badan midka Mareykanka.
Dabcan, maalgashadayaasha reer Yurub kama aysan dhigin keydkooda mid wax ku ool ah maalgashiga noocan ah. Ilaa heer in hab u horseedaa curyaannimo ilaa dhammaadkii 2016. Gaar ahaan, tusmada suuqa kala iibsiga ee saamiyada Isbaanishka, Ibex 35, oo lumiyay boosas muddadan oo ay ahayd inuu booqdo heerar aan la arkin sannadihii la soo dhaafay, sida 8.600 dhibcood oo ay booqatay sannadihii la soo dhaafay. sanadka. Sababtaas awgeed, suurtagalnimada hoos u dhac ku yimaada suuqa saamiyada ayaa ka sii darnaan doona, fikradda qayb weyn oo ka mid ah falanqeeyayaasha dhaqaalaha.
Tilmaamaha ku-simaha suuqa saamiyada
Sikastaba xaalku ha ahaadee, xal kale ma jiri doono aan ka aheyn soo dhoofinta talaabooyin taxane ah oo hadafkooda ugu weyni yahay in laga ilaaliyo lacagteenna waxa ka dhici kara suuqyada sinnaanta bilaha soo socda. Iyada oo si furan loo qaadanayo talooyinka soo socda ee aan ku soo bandhigno qodobkaan hoose.
Waxay noqon doontaa wax badan xulasho badan si aan u sameysano faylalka soo socda ee maalgashiga tan iyo wixii hada ka dambeeya, dhammaan soo jeedimaha suuqa saamiyada mar dambe ma ansaxidoonaan sidii ay ahaayeen hadda.
Ma jiri doonto xal kale oo aan ahayn kala duwanaanshaha maalgashiga suuqa saamiyada oo leh hanti maaliyadeed oo kale oo ah qaaciddo lagu helo faa'iidooyin raasumaal cusub oo laga helo hawlgallada la fuliyay.
Macaamillada suuqa saamiyada marwalba waa inay ahaadaan Degdeg oo u tag shuruudaha muddada gaaban si aanad ugu dhicin boosaska furan.
Shaki kuma jiro in muddadan cusub ay keeneyso wax cusub fursadaha ganacsiga Waa in la ogaadaa inay ka faa'iideystaan ​​xaaladdan hadda ka dib dhici karta.
La xoojinta dhicitaanka waxay si gaar ah u noqon kartaa rabshad sababtan awgeedna taxaddarku waa inuu noqdaa isku-duwaha guud ee falalka maalgashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexe.
Waxay noqon kartaa wakhti ka bax suuqyada dhaqaalaha oo aad ku raaxeysato dakhliga soo xarooday illaa hadda. Ka baxsan tixgelinta kale ee farsamada.
Hadda laga bilaabo waxay noqon doontaa mid aad u adag hel soo celinta oo ay bixiso saamiyadu sannadihii la soo dhaafay sidaas darteedna ay lagama maarmaan noqon doonto in lala noolaado xaaladdan cusub ee suuqyada maaliyadeed.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Alaabada maaliyadeed » Wareegga waxsoosaarku wuxuu saadaalinayaa hoos u dhac dhaqaale oo soo socda
Shuruudaha aruurinta dheefaha shaqo la'aanta
Waa maxay xumbada dhaqaale?
Ku hel macluumaadka ugu fiican ee ku saabsan dhaqaalaha iyo dhaqaalaha iimaylkaaga.